Onyankopɔn Din De Sɛn? | Bible Nsɛmmisa Ho Mmuae
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Yɛn abusuafo nyinaa, obiara wɔ din a yɛde frɛ no. Nyɛmmoa mpo, yetumi ma wɔn din! Enti sɛ Onyankopɔn wɔ din a, ntease nnim anaa? Sɛ yɛhwɛ Bible mu a, yehu sɛ Onyankopɔn wɔ abodin bebree; abodin no bi ne, ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn, Awurade Tumfoɔ, ne Ɔbɔadeɛ. Nanso ɔwɔ edin ankasa.—Kenkan Yesaia 42:8.
Bible nkyerɛase pii mu no, yehu Onyankopɔn din no wɔ Dwom 83:18. Sɛ yɛfa Kyerɛw Kronkron—Wiase Foforo Nkyerɛase Bible no sɛɛ a, ɛhɔ kenkan sɛ: “Wo a wo din de Yehowa no, wo nko ara ne Ɔsorosoroni, asase nyinaa so.”
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde Onyankopɔn din frɛ no?
Onyankopɔn pɛ sɛ yɛde ne din frɛ no. Sɛ yɛne nnipa a yɛdɔ wɔn, te sɛ yɛn nnamfonom rekasa a, yɛde wɔn din ankasa frɛ wɔn. Onyankopɔn na yɛremfa ne din mfrɛ no anaa? Yesu Kristo nso hyɛɛ yɛn nkuran sɛ yɛmfa Onyankopɔn din mfrɛ no.—Kenkan Mateo 6:9; Yohane 17:26.
Nanso sɛ yebetumi abɛyɛ Onyankopɔn adamfo a, ɛnyɛ ne din nko ara na ɛsɛ sɛ yehu, na mmom ɛsɛ sɛ yehu ne ho nsɛm pii. Nea ɛsɛ sɛ yehu no bi ne sɛ, Onyankopɔn te dɛn? Yebetumi abɛn Onyankopɔn ama no ayɛ yiye? Wubetumi anya saa nsɛmmisa yi ho mmuae afi Bible mu.
Dɛn Ne Onyankopɔn Ho Nokwasɛm?